InboxAware: Email Inbox Kuiswa, Kununurwa uye Kuzivikanwa Kuongorora | Martech Zone
Delivering email to the inbox continues to be a frustrating process for legitimate businesses as spammers continue to abuse and damage the industry. Because it’s so easy and inexpensive to send email, spammers can simply jump from service to service, or even script their own sends from server to server. Internet service providers (ISPs) vakamanikidzwa kuratidza vanotumira, kuvaka mukurumbira pakutumira IP kero nenzvimbo, pamwe nekutarisa padanho rega rega reemail kuyedza kubata vatadzi.
Nehurombo, kuburikidza nekuwanda kwekuchenjerera, mabhizinesi anowanzozviwana akaremberedzwa muma algorithms uye maemail avo anoendeswa akananga kune iyo junk firita. Painoendeswa kunejunk folda, iyo email yakaunzwa zvinehunyanzvi uye; Nekuda kweizvozvo, makambani haana hanya nenyaya yekuti vanyori vavo havana kumbobvira vagamuchira meseji yavo. Nepo kuburitswa kwaimbove kunongedzerwa kwakanangana nehunhu hweyako email sevhisi yekupa, kununurwa ikozvino kwave kungoenderana nezve algorithms.
Regardless of whether you’ve built your own service, are on a shared IP address, or a dedicated IP address… it’s critical to monitor your inbox placement. And, if you happen to be migrating to a new service provider and kudziya IP kero, kuongorora kwakanyatso kuita nzira yekuona kuti mameseji ako ari kuonekwa nevateereri vako.
Kuti ugone kuongorora zvakanaka kuti yavo email yakaita kuinbox kwete iyo junk folda, iwe unofanirwa kuendesa mbeu runyorwa rwevanyori kune ese maIPs. Izvi zvinogonesa vatengesi veemail kuti tarisa inbox kuiswa uyezve matambudziko ezvinetso padanho rekusimbisa, iro renzvimbo, kana iyo email danho kuti uone kuti nei maemail avo angaendeswa kune zvisingavaki mafaira.
InboxAware Dhirivhari Platform
InboxAware ine ese akakosha maficha anodikanwa ekutarisa yako email inbox kuiswa, mukurumbira, uye kwese kuburitsa.
Email Kuzivikanwa Kuongorora - Tora rugare rwepfungwa nema automated chenjedzo uye chikumbaridzo chekutarisa. Gadza makomo ako ekugashira uye ngatitarise iwe kana chimwe chinhu chataridzika kunge chisina kunaka.
Rudzi rweMbeu Kuedzwa – modeled after best practices used by emailing experts, InboxAware’s inbox placement monitoring enables email marketers to identify and overcome authentication filters and spam traps that can halt your emails before you hit send.
Kugovera Kuzivisa - InboxAware inopa vashandisi yakajeka uye microscopic maonero avo ese eemail data, ayo anogona kusefetwa uye kupatsanurwa pasina kutumira kunze kune kuverenga-chete mushumo.
InboxAware inokutendera iwe kugadzirisa rako pachako dashboard nekusarudza kubva kune dzakawanda zvekuzivisa mawadhi uye nekuzvironga neyakareruka dhonza-uye-kudonha mashandiro. Kurongeka kwavo kwakapamhamha kwemawidgetti anowirirana anoongorora mashandiro eemail ako pazviratidzo zvakawanda.
Bhuka iyo InboxAware Demo
Kuzivisa: Tiri kushandisa edu akabatana zvinongedzo mune ino chinyorwa.
Tags: kuburitswakuendesa chikuvaemail kuburitswaemail mukurumbiraemail mukurumbira manejimendiemail mukurumbira kuongororainbox kuongororainboxawarendandanda yembeu